Nagu saabsan - Hebei Factory Arts Ideal
Warshadda Farshaxanka ee Hebei. waa soo saare khaas ah oo ganacsade ah naxaas marmar iyo walxo bir ah oo qiyaastii 30 sano oo khibrad ah. Shirkaddayadu waxay ku taal magaalada Shijiazhuang, gobolka Hebei ee Shiinaha.
Baaxaddayada ugu weyn ee ganacsigeennu waa dhammaan noocyada dhagxaanta iyo alaabada naxaasta ah oo ay ku jiraan tirooyinka bari iyo galbeed, xayawaannada, taalooyinka, taallada bustka, dheriyo ubax ah, tiirar, ilo, gazeboes, dabka iyo alaabada hadiyadaha yaryar. waxyaabaha birta lagu shubo waxaa ka mid ah gazebo, xayndaabka .gate, iyo laambadda. Waan ku faraxsanahay inaan amarrada ku qaadno iyadoo la raacayo tusaalooyinka ama sawirrada lagaaga qaado.
Waxaan had iyo jeer ku adkeynaa mabda'a faa'iidooyinka labada dhinac iyo horumarinta wadajir. Dhammaan alaabooyinkayagu si wanaagsan ayey u iibiyaan adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Koonfur Afrika, gebi ahaanba in ka badan 30 dal iyo gobollo.
Waxaan si daacad ah u dooneynaa inaan la shaqeyno macaamiisha dal iyo dibadba iyadoo lagu saleynayo waxtarka labada dhinac. Waxaan jeclaan laheyn inaan ku siino badeecooyin qanciya oo aan la wadaagno adeeg tayo sare leh.
Shirkadda Hebei Ideal Arts waxay ku taalaa Degmada Quyang, ee Gobolka Hebei, taas oo loo yaqaan "magaaladii farshaxanka Shiinaha"
Warshada waxaa la aas aasay sanadkii 1985. Ilaa hada, waxaan haynaa 35 sano oo khibrad soo saar iyo iib ah ah.
Laga soo bilaabo aqoon isweydaarsigii qoyska ee asalka ahaa ilaa warshadaynta casriyeynta. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqeynaa martida cusub iyo kuwii horeba taageeradooda iyo gacan qabashadooda.
Warshaddeena waxay hada leedahay nidaam wax soo saar iyo iibin aad ufiican.
Waaxda Naqshadeynta, waaxda samaynta moodeelka. Waaxda xulashada alaabta ceeriin. Waaxda wax soo saarka. Waaxda nadiifinta. Waaxda aqbalida. Iyo waaxda baakadaha ugu dambeysa.
Waax waliba waxay leedahay hogaamiye kooxeed in kabadan 15 sano oo khibrad shaqo ah. Dhamaan howlaha wax soo saarka si adag ayaa loo baahan yahay. Kaliya sidan ayaan ku xaqiijin karnaa in macaamiisha ay heli doonaan alaab tayo sare leh.
Sanadihii ugu dambeeyey. Si loo balaariyo ganacsigeeda dibada. Waqtigan xaadirka ah, waxaan la sameynay iskaashi muddo dheer ah oo xasiloon macaamiisha ka socota Faransiiska, Mareykanka, Talyaaniga, Ruushka, Switzerland, Qatar, Sacuudi Carabiya, Kuuriyada Koonfureed iyo dalal kale. Macaamiisha ugu dambeysa ee wadamada qaarkood sidoo kale waxay ka iibsadaan warshadeena Waxayna noo bartaan asxaabta, qoyska, deriska.
Waxaan ku helnay sharaf sare xulashadeena alaabta iyo shaqo wanaag.
“Tayadu waa dhaqankeenna” Shaqo kasta oo farshaxan ahi waxay leedahay sheeko u gaar ah. Badeecad kasta oo aan soo saarno waa la hubiyaa lana beddelaa marar badan. Markasta oo aan ka helno jawaab qancisa macaamiisheena. Waan ku faraxsanahay sida martida oo kale.
Hadaad ubaahantahay alaabtayada. Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Waxaan markasta joognaa adeeggaaga. Hadafkeenu waa "in dunida laga dhigo jacaylka lagu sameeyay Shiinaha"